प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य- फेरिएका मृगौलाको आयु कति ?| Nepal Pati
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी पर्ने वित्तिकै उनको स्वास्थ्यसँग जोडेर अनेक हल्ला फैलिने गर्छन । यसपटक पनि त्यस्तो हल्ला फैलियो । गलत हल्ला फैलाउने व्यक्ति पक्राउ परे । यसअघि दुईपटक त्यस्तो हल्ला फैलिसकेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको छातीमा संक्रमण देखिनुका साथै शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित भएको पाइएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर हुँदै गएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् ।
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमै आराम गरिराखेका उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नदेखिएपछि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री अस्पतालमा पुर्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार उनको स्वास्थ्य समस्या नियन्त्रणमा आइसकेको छ तर आरामको आबश्यक छ । दशैं सकिएसँगै रूघा खोकीको समस्या झेल्न थालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबारदेखि ज्वरो समेत आउन थालेको थियो । ज्वरोसँगै समक्रमण पनि देखियो ।
मान्छेको भेटघाटमा संक्रमण भईहाल्ने जोखिम प्रधानमन्त्रीलाई छ । मृगौला फेरेका बिरामीमा त्यस्तो समस्या देखिन्छ । स्वास्थ्य बिग्रिएकै कारण प्रधानमन्त्री शनिवार आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चियापानमा सहभागि भएनन्।
झण्डै एक दशकअघि प्रधानमन्त्रीले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका थिए । मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको व्यक्तिले निको नहुँदै धेरै मानिसहरू सँग भेटघाट गर्नु ठीक हुँदैन । भेटघाट जति धेरै भयो संक्रमण हुन सक्ने जोखिम त्यति बढ्छ । अहिले पनि थप संक्रमणबाट जोगाउन अस्पतालमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई निकै कम मानिससँग भेट्न दिइएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीमा अहिले ब्रोङ्काइटिसको समस्या देखिएकाकाले अस्पतालमै राखेर एन्टीबायोटिक औषधीको अवधी पुरा गर्ने उनीहरूको योजना छ । मृगौला र मुटुमा केही समस्या देखिएको छैन । तर प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाको आयु खासमा कति हुन्छ ?
विज्ञ चिकित्सकहरुको भनाई अनुसार मृगौलाका प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिको हकमा बेला बेला समस्या आइरहन सक्छ । नियन्त्रण भएन भने मुटु, कलेजोमा पनि असर गर्छ । विज्ञानले प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाको आयु १० देखि १५ बर्ष मानेकाे छ । तर प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको जीवनशैली ठीक हुँदा आफुसँग भएको मृगौला जति नै काम गरेको उदाहरण पनि छन् । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिब्याका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति ३० बर्ष पूर्ण स्वस्थ भएर पनि बाँचेका छन् ।
‘विज्ञानले एउटा अनुसन्धानबाट आयु तोकेको हो त्यो ठीकै हो’ उनले भनिन, ‘तर मृगौला प्रत्यारोपणसँग व्यक्तिको अरु स्वस्थता, जीवनयापन जोडिएकाले यसको आयु लङलाईफ पनि हुन्छ ।’ बैंककमा उपचारमा गएका बेला प्रधानमन्त्री निकै कठिन अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएका थिए ।